Maxaa u sabab ah bixitaanka Ciidanka Itoobiya ay ka baxeen Qaybo ka mid ah Gobolka Hiiraan | Most Reliable News Source
Maxaa u sabab ah bixitaanka Ciidanka Itoobiya ay ka baxeen Qaybo ka mid ah Gobolka Hiiraan
Oct 23, 2016 - Comments off
Axad, Oktoobar 23, 2016— Ciidamada Itoobiya ee AMISOM Qaybta ka ah, ayaa
Ciidamada Itoobiya ee AMISOM Qaybta ka ah, ayaa subaxnimadii hore ee saakay ka baxay Deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiiraan, halkaasoo sida la sheegay ay dib ula wareegeen xoogag ka tirsan Al-shabaab.
Sidoo kale, isla ciidamada Itoobiya ayaa todobadkii hore isaga soo guuray saldhig millitari oo ay ku lahaayeen Deegaanka Ceel-cali ee Gobolka Hiiraan, halka Bishii lasoo dhaafay ay sidoo kale isaga baxeen deegaanka Moqokori ee Gobolka Hiiraan, waxaana Deegaannadan oo idil dib u qabsatay Al-shabaab.
Dadka sida weyn ugu Dhuun-daloola arrimaha Ciidamada, ayaa arrintan dhaq-dhaqaaqa ay sameynayaan ciidammada Itoobiya ku macneynaya culeyska siyaasadeed ee ka jira gudaha Itoobiya oo ay ka socdaan kacdoon ay dhigayaan qaar ka mid ah Qowmiyadaha dalkaas ku dhaqan.
Xeel-dheerayaasha Arrimahaan ka faaloonaya ayaa iyagna qaba in Xukuumadda Itoobiya ay markan u baahan tahay ciidamo dheeraad ah si ula dacaasho kacdoonka siyaasadeed ee ka jirta gudaha dalkeeda, taasoo keentay in qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan dib uga soo saarto ciidammadii ka joogay.
Ugu dambeyn, 09-kii Bishii Juun ee Sannadkaan, ayay ahayd markii Dagaal culus oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo ruux uu ku dhaxmaray gudaha deegaanka Halgan ciidammada Itoobiya iyo dagaalamayaasha Al-shabaab, waxaana lagu sheegay dagaalkaas in uu ahaa kii ugu cuslaa oo ay ciidamada AMISOM isaga horyimaadaan Al-shabaab gudaha gobolka